Nandray fepetra ny fanjakana-VOASAMBOTRA NY MPANAFINA VARY -
AccueilRaharaham-pirenenaNandray fepetra ny fanjakana-VOASAMBOTRA NY MPANAFINA VARY
03/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia nikaikaika ny vahoaka tamin’ny fiakaran’ny vidim-bary tampoka tsy fantatra hoe nahoana. Maina ny tany tao anatin’ny fotoana nisian’izany. Teo indrindra no nahatonga an’ireo mpamongady ho nanana sain-dratsy hampiakatra ny vidim-bary. Tany amin’ny 1 350 Ar ny kilaon’ny vary no niakatra 2 000 Ar ary efa misy aza no tafakatra 2 200 Ar ny kilao. Sahiran-tsaina ny vahoaka vokatr’izany satria toa nitambatambatra ny zava-nisy. Nihantona ny orana, maina ny tany, ireo vary aloha efa niakatra kanefa dia iarahan’ny rehetra nahalala fa mahavoky indray andro ireny fa tsy mahavita taona. Kanefa tao anatin’izany fotoana izany no niakaran’ny vidim-bary tampotampoka. « Moa ve ny fiatoan’ny orana no tokony hampiakatra ny vidim-bary ? », hoy ihany ny fanontanian’ny maro. Voararan’ny lalàna ny zavatra tahaka izany ary azo enjehina satria fanararaotana ny efa fahavoazan’ny sasany.
Rehefa izay dia tsy nipetra-potsiny ny fitondrana fa nidina teny amin’ny tsenan’Anosibe ny mpanara-maso mpanao an’ireny varo-maizina ireny. Ny zava-nitranga dia maromaro ny mpamongady momba ny vary, ny voamaina, sy ireo zavatra hafa eny amin’ny tsenan’Anosibe. Rehefa nampiantso ny mpandraharaha ara-bary ny fanjakana satria te hitsinjo ny vodiandro merika sy ny mety ho fiantraikan’io haintany io amin’ny andavanandron’ny mponina dia nisy nanafina vary ireo mpamongady ireo. Raha efatra izy ireo no manao ny asa dia miray tsikombakomba izy ireo hoe mihidy ny telo fa iray ihany no misokatra mivarotra. Rehefa izay dia lasa mihena ny vary tonga eny amin’ny mpaninjara. Tsy izay ihany fa ireo izay mahita dia manangona vary satria matahotra ny tsy hihinam-bary. Fantatsika tsara fa foto-tsakafontsika io vary io. Toa ny misakafo tapa-tsinay raha tsy mihinam-bary. Nanao fitsirihana an’ireo mpamongady ireo àry ny mpanara-maso ny vidim-bary ka nahatrarana mpamongady iray nanafina vary. Rehefa izay dia nandraisan’ny fanjakana fepetra avy hatrany io mpivarotra io ka nosamborina. Tsy misy ny famotorana atao ary izay mety ho mpiray tsikombakomba aminy dia tsy maintsy handraisana fepetra ihany koa.
Mba tsy hisian’ny fitohizan’ity fiakaran’ny vary ity dia mangataka fiaraha-miasa amin’ny vahoaka ny fitondram-panjakana, ny minisiteran’ny Varotra, mba hampilaza haingana raha vao misy tranga na fanafenana vary hitan’izy ireo fa tsy maintsy ilana fifanolorana tanana amin’ny vahoaka izany fa tsy ho vitan’ny minisitera irery. Tsy tokony hanao mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany no aripaka tahaka izany ny mpivarotra mpamongady vary. Misy te hanan-karena tampoka dia ny mpiray tanindrazana aminy ihany no asiany. Efa nametra araka izany ny minisitera fa hampihatra ny lalàna ho an’ireo izay tsy manara-dalàna satria miteraka fikorontanan-tsaina ho an’ny vahoaka izany.